MAANHADAL: Maxaa sababay gadoodka ciidamada Dowladda Faderaalka Soomaaliya? (dhegayso) – Radio Daljir
MAANHADAL: Maxaa sababay gadoodka ciidamada Dowladda Faderaalka Soomaaliya? (dhegayso)
Maarso 22, 2019 11:39 b 0
Barnaamijka Maan hadal waxaa diiradda uu saarayaa todobaadkan gaddooodkii ay sameyeeen ciidamo katirsan dowladda faderaalka Soomaaliya, kuwaasi oo baneeyey dhulal ay joogeen oo ku yaalay gobalada Shabeelooyinka oo ay difaac kaga jireen ururka Al-shabaab.
Arrintaasi oo siwayn wax la isaga waydiinayo sababaha keenay, waxaana ay ka cabanayaan mushaar la’aan, halka dowladduna ay waddo nidaamyo ka duwan hanaankii hore bixinta mushaarada ee ciidamada dowladda.
Waxaa marti ku ah Maxamed Caalim oo hay’adda UNESCO u aqoonsatay danjire nabadeed, wasiir horay uga tirsanaa Puntland Jaamac Xirsi Faarax.
Axmed Tallman ayaa soo jeedinaya, oo kasoo tebinaya xarunta Daljir Bosaso.
MAANHADAL 231 Wararka 20430
Dowladda Kenya oo sheeganaysa kheyraadka ku jira badda dacwada ka taal ICJ in wabiyadeeda ka yimaadaan
Daljir & BBCMA: Baraarugga Haweenka (Xaawo Axmed – dhegayso)